नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): आतंकबादसँग नेपालले हारेको अर्को कालो दिन : माओवादीले फेरी कङ्रेस, एमाले, मधेसी सबैलाई थाङ्नामा सुतायो !
आतंकबादसँग नेपालले हारेको अर्को कालो दिन : माओवादीले फेरी कङ्रेस, एमाले, मधेसी सबैलाई थाङ्नामा सुतायो !
जनताका घाँटी रेट्ने ६५०० माओवादी लडाकुहरु अब सेनामा लगिदै, पुनर्स्थापनाका नाममा प्रत्येक लडाकुलाई ९ लाख रकम राज्य कोसबाट दिने निर्णय, चोरलाई चौतारो साधुलाई शुली भयो नेपालमा । अरु सबै भताभुँग बनाएको माओवादीले नेपाली सेनामा पनि माओवादी लडाकुहरु घुसाएर भताभुँग बनाउन सफल हुनेभयो ।
यो सम्झौतालाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने यस्ता सम्झौता आज सम्म कती पटक भए र माओवादीले कती कार्यान्वयन गर्‍यो त्यो पनि मुल्याङ्कन गर्न नभुल्नुहोला नि !
६ हजार ५ सय माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने सहमति गर्दै मुख्य तीन दल शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भएको माओवादी, कांग्रेस
र एमालेको संयुक्त बैठकले स्वेच्छिक पुनर्स्थापना हुने लडाकूलाईले ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ। सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशीला कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार समायोजन हुने ६ हजार ५ सय लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहनेछन्। सेना मातहतको महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट लगिने छ भने माओवादी लडाकु ३५ प्रतिशत हुनेछन्। पुनर्स्थापनामा जानेलाई तह अनुसार साढे ४ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराइनेछ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने दलीय सहमतिलाई माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले भने विरोध जनाएको छ। मंगलबार दिउसो र्‍याडिसन होटलको निर्णयदेखि नै वैद्य पक्षलाई मनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहाल सक्रिय थिए। वैद्यलाई मनाउन कोसिस गर्दा सहमतिमा हस्ताक्षर हुन केही ढिलाइ भएको थियो। हस्ताक्षर गर्नु केही समयअघि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैद्यलाई मनाउने अन्तिम कोसिस गरेका थिए। तर वैद्य पक्ष सहमत नभएपछि दाहालले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। 'जनवादी सहमति पार्टी नीति विपरित छ', सहमतिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले भने- 'भोलि पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक धारणा गर्छौं।'
संयुक्त बैठक अघि ३ वटै दलले प्रधानमन्त्री निवासमा छुट्टा छुट्टै बैठक गरेका थिए। यसअघि र्‍याडिसन निर्णय बारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुख्य मधेसी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बोलाइ ब्रिफिङ गरेका थिए। सोही बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता ६ हजार ५ सय लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमत भएका थिए।
यसअघिको र्‍याडिसनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशीला कोइराला तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरु वर्षामान पुन, कृष्ण सिटौला तथा भीम रावल समेत उपस्थितिमा बैठक गरेका थिए। १० वर्षदेखि हिंसा मच्चाउँदै आएको माओवादी खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रममा २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए। यही सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीति प्रवेशको वैधानिक बाटो खुला गरेको थियो।
सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि पार्टीको सेना नत्यागेको भन्दै कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिले सेना समायोजनका लागि माओवादीलाई दवाब दिँदै आएका थिए। नयाँ संविधान लेखनका लागि समेत शान्ति प्रक्रिया टुंगिनु पर्ने भन्ने शर्त कांग्रेस-एमालेले अघि सारेपछि अध्यक्ष दाहालको समर्थनमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार यो विषय टुंग्याउन सक्रिय देखिएको थियो।
सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु मध्ये माओवादी अध्यक्ष दाहाल सबै भन्दा उत्साहित देखिएका थिए । उनले २०६३ असार २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफुबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले सार्थकता पाएका बताए । साथै शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई यो सहमतिले साकार पार्ने दावी गरे । उनले पार्टी भित्र असहमति भएपनि सहमति कार्यन्वयन हुने बताएका थिए ।
त्यसैगरी कांग्रेस सभापति कोइरालाले सहमतिलाई ऐतिहासिक निर्णय भने । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको दावी गरे । उनले मुलुकमा अमन चयन कायम हुने दावी गरे । साथै कार्यन्वयनको विकल्पै नभएको बताए ।एमाले अध्यक्ष खनालले पनि ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिए । उनले सहमतिले दूरगामी महत्व राख्ने बताए । उनले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै सम्वृद्ध नेपाल बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका सहमतिले खेल्ने उल्लेख गरे ।
सहमतिका अर्का हस्ताक्षर कर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष गच्छदारले नेपाली जनताको आशा पुरा हुने अवस्थामा आएको दावी गरे । मधेसी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण कार्यको नतिजा स्वरुप यो सरकार बनेर सहमति भएको उल्लेख गर्दै संविधान लेखनको ढोका खोलेको बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले आज भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ । माओवादीको संस्थापन पक्षले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि देखि नै वैद्य पक्षलाई मनाउने प्रयास गरेको भएपनि त्यो सफल हुन नसकेको श्रोतले बताएको छ । वैद्य पक्षले भोली पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना असहमति सार्वजनिक गर्ने भएको छ
६ हजार ५ सय माओवादीलाई लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्दै शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्ने मुख्य ३ दलको निर्णयप्रति मधेसवादी दलहरुको संयुक्तो मोर्चाले सहमति जनाएको छ। शान्ति प्रक्रिया अन्त्यका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेटी हरेक पटकका निर्णय बारे ब्रिफिङ गर्दै सहमति लिएका थिए। र्‍याडिसन होटलको ३ दलको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर उनले मधेसवादी दलहरुलाई निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस लगत्तै साँझ बालुवाटारमा ३ दलबीच भएको संयुक्त बैठकपछि सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा समेत दाहालले मधेसवादी दलहरुलाई बोलाएका थिए।
यि र यस्ता उधारा सम्झौता का थाँती धेरै छन तर माओवादीले कार्यान्वयन गरेको छैन र उसले जसरी हुन्छ अरुलाई झुक्काउदै एक पछी अर्को गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै गैरहेको छ । अरु दल र तिनका नेता प्रचन्डका रबर स्ट्याम्प बन्दै गैरहेका छन ।
if there will be peace in nepal its nepali people's wants try to think positively ,sampadak jeu naramro manche lai sadai naramro dristi lae hernae ho bhane tiyo manche lae sadai naramro kam gadai jancha.ramro kura lai ramrai bhanuhos tapai haro lai nepal ma shanti ayako monparcha bhane
sabai jana Nepali harule ramro bhaner swagat gareko samjhauta lai tapai kin birodh garirahanu bhaeko chh? Balmiki RISHi pani pahila daka thie are pachhi ekjana rishi le MARA bhaner gali garda tyahi mara bhanne shabda ram ram hudai gayo ra prakhyat rishi bhaeko kura tapailai awagat nai hola . Kharab kam le suru garyo bhandaima tyo manchhe kharab nai hunchha bhanne chhaina. Pachhi atmaglani bhaer sudharko batoma pani aauna sakchha bhanne kura lai birsanu hudaina
It is true Maoist are terrorist, But what we need to remember if someone wants to come to the right track peace process let them to come and join in peace process . That is what i am thinking .
Its is true that different people have different political views and they have the rights to support any parties they like.With due respect Ram Prasad Ji,we should support the good things any parties do until and unless it is good for the people and country.